FJKM : Ho tanterahina any Toamasina ny fankalazana ny faha 200 taona LMS sy ny faha 50 taona ny FJKM - Madagascar Informations
Ny 12 ka hatramin’ny faha 19 ny volana Aogositra ho avy izao no ho tontosaina any toamasina ny ivon’ny jobily faha 200 taona nidiran’ ny Misionera LMS (London Missionary Society ) teto Madagasikara sy ny faha 50 taonan’ny Fiangonan’ny Jesoa Kristy eto Madagasikara .
Noho izany dia asaina avokoa ny kristiana FJKM manerana ny sinaodam-paritany miisa 38 eto an-toerana sy ny any ampitan-dranomasina hiara-paly mandritra ireo andro lehibe ireo izay marihina fa voalohany no hankalazana izany eto amin’ny sahan’ny FJKM .
Ho feno ny fandaharam-potoana manomboka ny Alahady faha 12 ka hatramin’ny Alahady faha 19 ny volana Aogositra ka isan’izany ny fotoam-pivavahana isa-maraina arahina asa fampaherezana , fanompoam-pivavahana isan-kariva arahina velan-kevitra samihafa ,ny fijoroana vavolombelona ,fitokanana tsangambato ,sakafon-jobily ,antsan-kira sy teatra momba ny tantarany LMS sy ireo maro hafa .
Marihina fa trano sekoly lehibe any Toamasina no tsangambatony taon-jobily ary tranobe misy rihana 3 kosa ho an’ny eto Antananarivo izay nato hahazaka mpianatra 200 isa ho enti manatanteraka ny vinan’ny FJKM ny amin’ny ahafahana mamoaka mpitandrina miisa 100 isan-taona .
← ’Approvisionnement en eau de Tana
Herinandrom-pirenena ho an’ny fampinonoan-dreny : Ho tanterahina manomboka ny 13 ka hatramin’ny 18 Aogositra izao →
le pardon et le changement aux mots d’ordre
20 août 2017 Gasikara 0